फोहोरी खेलमा नेतृत्व लिप्त हुँदा कांग्रेसमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छः प्रकाशमान सिंह « रिपोर्टर्स नेपाल
फोहोरी खेलमा नेतृत्व लिप्त हुँदा कांग्रेसमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छः प्रकाशमान सिंह
काठमाडौं, ७ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी संरचना आफ्नो पक्षमा पार्ने फोहोरी खेलमा नेतृत्व तह लिप्त हुँदा कांग्रेसमाथि अवैधको प्रश्न उठ्न थालेको बताएका छन् । जनकपुरमा आज नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै नेता सिंहले १३औं महाधिवेशनबाट चुनिएर आएका सभापति र पदाधिकारीहरुको अयोग्यताकै कारण पार्टी अवैध हुने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए ।
केही जिल्लाको महाधिवेशन सकिँदा केही जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता नै नटुग्याउनु नेतृत्वको चरम अक्षमता र लापरवाही भएको उनको भनाई थियो । पदाधिकारीहरुले महाधिवेशनलाई निकै हल्का रुपमा लिएर चार चार पटक मिति परिवर्तन गरेको भन्दै अब कुनै हालतमा पनि मिति सार्न नदिने चेतावनी सिंहले दिए । तोकिएको समय मंसिर ९ मै केन्द्रीय महाधिवेशन गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
आफ्नो स्वार्थ परुा गर्नकै लागि हुँदै नभएको क्रियाशील सदस्यताको विवाद चर्काइएको भन्दै उनले निर्वाचन समितिलाई तत्काल क्रियाशील सदस्यको सूची जिम्मा लगाउन नेतृत्वसँग आग्रह गरे ।
१४औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवार बनेरै छाड्ने दृढता देखाउँदै सिंहले भने, ‘महाधिवेशन शुरु भइसक्यो, क्रियाशील सदस्य नदिने के तरिका हो यो ? परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि यो सबै खेल भइरहेको छ ।’
महाधिवेशनलाई खेलाँचीका रुपमा लिइएमा सह्य नहुने चेतावनी दिँदै सिंहले भने, ‘१४औं महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता छ । म सभापतिको अभियानमा होमिइसकेँ ।’ पार्टीलाई संस्थागत गर्ने एकसूत्रीय अभियान आफ्नो रहेको भन्दै उजले भने, ‘ए कांग्रेस, बी कांग्रेस भन्ने गूटीय अवधारणा समाप्त गर्नुपर्दछ । विधि नियम अनुसार चल्ने पार्टी बनाउने मेरो ध्येय छ ।’
फरक प्रसंगमा बोल्दै नेता सिहले कांग्रेस नेत्त्रित्वको कमजोरीका कारण कम्युनिस्ठहरुले ब्यवस्था माथि प्रहार गर्ने सुरु गरेको बताए । हर हालतमा कांग्रेस महाधिवेशन सम्पन्न गरेर संसद संचालन र रास्ट्रिय राजनीति आँकलन गरेर अगाडि बिकसित परिस्थिति अनुरुप चल्नु पर्ने बताएका छन् ।
साथै नागरिकता लगायत मधेसका मुद्दाहरु विधि प्रक्रियामा अवलम्बन गरेर तत्कालै हल गर्नु पर्ने भन्दै मधेस र हिमाली क्षेत्रमा सिमाना जोडिएका नागरिक नै सच्चा देश भक्त रहेको समेत बताएका छन् । नेता सिह आज महोत्तरीमा आज आयोजित कार्यक्रममा सभागि हुने क्रममा जनकपुर पुग्नु भएको हो । नेता सिह को साथमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव र किरण यादव समेत रहेका छन् ।
थाहै नदिई बैठक स्थगित् गरेको भन्दै दुर्गा पौडेल आक्रोशित
काठमाडौं, ६ माघ । सत्तारूढ राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक थाहै नदिई स्थगित् गरिएको भन्दै जनमोर्चाकी
प्रचण्डको प्रस्तावमा शंकर पोखरेलको व्यंग्य
काठमाडौं, ६ माघ :स्थानिय तहको निर्वाचन अघि संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव प्रति नेकपा (एमाले)
नारायणकाजी श्रेष्ठ कोरोना संक्रमणमुक्त
काठमाडौँ, ६ माघ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्। हिजो (बुधबार)
गठबन्धनप्रति एमाले महासचिव पोखरेलको व्यंग्य- वैशाखमै संसदको चुनाव गर्न तयार भए रे !?
काठमाडौँ, ६ माघ। स्थानीय तहको निर्वाचनअघि संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने प्रस्तावप्रति नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर
जहाज भित्रै यात्रु बेहोस
काठमाडौं, माघ ६ । काठमाडौंबाट नेपालगञ्जको उडानका क्रममा एक जना महिला बेहोस भएकी छन् ।
बाइडेनको चेतावनी-‘युक्रेनमाथि आक्रमण गरे त्यो रुसको लागि विनाशकारी हुनेछ’
वासिङ्टन [अमेरिका], ६ माघ: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुधबार दुई देशबीच बढ्दो तनावका बीच युक्रेनमा